May Nyane: မြသီလာရဲ့ အဝေးမှာ (၂)
ကျနော်တို့ မြသီလာနဲ့ ဝေးနေတာကြာခဲ့ပြီကော အခုလိုပြန်ဖတ်ရတာဝမ်းသားပါတယ်။
ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေကြတယ်ဆို ရုံးကန်ခဲ့ရတာတွေအတွက် အမြတ်ပါလေ။
အစ်မရေ.. မြသီလာရဲ့ အဝေးမှာ အဆင်ပြေကြပါစေလို့...။
ဆရာမ မြသီတာရဲ့ အဝေးမှာ အဆင်ပြေနေတာလေး ဖတ်ရတော့ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။
ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့ တကယ့်ကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ကြည့်နူးစရာလေးပါပဲ အမရေ... :)
အမေရိကားလို နိုင်ငံမှာပေမယ့် သဘာဝနဲ့နီးစပ်ပြီး အေးချမ်းလှတဲ့ နေရာလေးမှာ အမတို့မိသားစု အခြေချ ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ၊ သင်နိုင်သလောက် သင်ယူဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာကို အားပေးတယ်ဗျို့...၊ :D
ကိုယ့် Principle လေးကိုထိန်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တန်ဖိုးရှိအောင်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာကြောင်းလေး တစ်ခုသတိရမိတယ်၊ " Asamatter of style, I go with the current. But, asamatter of principle, I stand likearock " ဆိုတာလေ...။
မိသားစုအားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အဆင်ပြေ
နေတယ်ဆိုလို့ပါ။ ဖြစ်ချင်တာကို အခက်အခဲတွေ
အမျိုးမျိုးကြားထဲက ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက်
ဆရာမကြီး…. ဘေးမှာ နားကြပ်နှစ်ခုက ဘေးတဖက်တချက်မှာ ဂြိုဟ်တုဆံထုံးပုံနဲ့ဆိုတော့… ကိုလေးတို့၊ မောင်စိန်တို့ ပန်းချီထဲက ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေနဲ့တူနေတယ်။း-)
မမေငြိမ်း ရေးခဲ့တဲ့ ဘလော့ပေါ်က စာတွေအာလုံးထဲမှာ
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ရတာ အနှစ်ဆုံး လို့ ခံစားမိတယ်
မြသီလာအလွမ်းပြေတွေကို လဲ ကြိုက်တယ် ဒါပေမဲ့နာကျင်ကြေကွဲမှုတွေ မကျေမနပ်တာတွေ နဲ့
ပထမ မြသီလာရဲ့ အဝေးမှာတွေကလဲ ကောင်းပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ တခုခု လိုနေသလို
ဒီပို့စ်လေးကတော့ ဖတ်သူတိုငိးအတွက် ဗဟုသုတ၊ သုတ ရသ ဘ၀ အသစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်နဲ့
ကမ္ဘာကျော်မီဒီယာ တခုရဲ့ တစိတ်တပိုင်းကိုပါ သိခွင့်ရတာမို့ တကဲ့ ကို နှစ်သက်မိပါတယ်
ကျမ က VOA ရဲ့ နှစ်ရှည်ပရိတ်သတ်ဖြစ်ခဲ့တာမို့ ခုလဲ အင်တာနက်မှာ ကြည့်တာထက် ရေဒီယိုမှာ နားထောင်ရတာကိုပဲ နှစ်သက်တာမို့ နေ့စဉ်ကိုပဲ စွဲစွဲ မြဲမြဲ နားထောင်ဆောင်ဆဲ
ဆိုတော့ မမေငြိမ်း ကို ပို ရင်းနှီးမိနေပါတယ်
ရသ စာအုပ်စင် မှာ ရွေးချယ်ပေးတာလေးတွေလဲ
သဘောကျမိတာ ဒီမှာပဲ တလက်စထဲ ပြောခဲ့တော့မယ်..း)
အဆင်ပြေပါစေ ပျော်ရွှင်ပါစေ ရှင်..
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက်
မတ်လ မြန်မာပြည်ပြန်တုန်း ဆရာဦးလှရွှေနဲ့ ခဏလေး ဆုံမိတုန်းက ဆရာ့မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး တစ်ခုတွေးမိခဲ့တယ်။ အော် ဘ၀ကို တကယ် ကျေနပ်ဖူးခဲ့တဲ့သူတွေပါလား လို့။
ဘာပဲပြောပြော အစ်မလဲ ဘ၀ကို ကျေနပ်ဖူးခဲ့မှာ အသေအချာပါပဲ။ (ဆရာမငယ်ငယ်ဘ၀မှာ လိုင်းကားပေါ်က ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး)
ခုလဲ ကျေနပ်နေရတယ်ဆိုတာ ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီး ခံစားလို့ရပါတယ်။
အန်တီ ပြုံးပြုံး ရွှင်ရွှင် အားမာန် အပြည့် နဲ့အလုပ် လုပ် နေ ပုံ တွေ ရလို့ ဝမ်းသာ ပါတယ်. အန်တီတို့တအိမ်သားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ အမြဲပျော်ရွှင် ပါစေ
အမရေးတာတွေ ဖတ်ပြီး အမနဲ့ အတူ လိုက်မောရ စိတ်ညစ်ရ ကြောက်ရ ကြည်နူးရနဲ့ ရသကို စုံလင်နေတော့တာပါပဲ... အဲ့ဒါကပဲ ဘ၀ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်စုံတယ် ခေါ်မလားနော် အားလုံးဖတ်ရအောင် ဝေမျှလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ အလုပ်နဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမှာ ဘယ်တော့မှ မနေချင်ဘူး။ ဒါနဲ့ ဆရာမ ကျောင်းတက်ဖို့ ရှိတယ်ဆိုလို့ Full Time တက်ရင် အခုကျွန်မ ခံစားနေရသလို လူဖြစ်ရှုံးတယ်၊ လူမှုအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာမျိုး ဘယ်သူ့ကိုမှ မခံစားစေချင်လို့ ကျောင်းတက်ရင်တော့ Part time ပဲတက်ဖို့ အကြံပေးချင်တယ်။ ဆရာမမှာ ကလေးငယ်ငယ်လေး နှစ်ယောက်နဲ့ဆို ပိုတောင်ဆိုးဦးမယ်။ ဆရာမို့ အဆင်ပြေကြတာ ကြားရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်နဲ့ အိမ် ကားနဲ့ သွားရင်တောင်မှ ၃ နာရီလောက် သွားရတယ်ဆိုတော့ ဝေးလွန်းပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ နီးတဲ့နေရာကို အိမ်ပြောင်းလိုက်တာက ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်။
လာဖတ်သူအားလုံး မုဒိတာနဲ့ စိတ်ချမ်းသာကြတော့ ကျမလည်း ကြည်နူးမိပါတယ်..။ ခုလိုပဲ ရုန်းရင်း ကန်ရင်း ကြိုးစားရင်း ဆက်သွားရမှာပါ..။
စကားမစပ်.. မငယ်ရေ.. အလုပ်ကို ကားမောင်းတာက ၄၅မိနစ်ပါ.. ၄၀နဲ့ မောင်းရတာလေ..။စိတ်မပူနဲ့ :)
အရှေ့ပိုင်းမှာဆရာမအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့ ဒီပို့စ်လေးမှာဆရာမအဆင်ပြေနေပြီ ဆိုလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်....
အေးအေးချမ်းချမ်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေပြီး ကိုယ့်ဝါသနာနဲ့ ကိုက်တဲ့ အလုပ်လုပ်နေရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
တီချယ်ကြီး အညွှန်းကောင်းလို့ လာတောင် လည်ချင်လာပြီ။ တနေ့ပေါ့ ..
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး မ နဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင်မိပေါ့...